Dowladda oo sheegtay in 300 oo dhallinyaro ah ay ka soo baxeen Al-Shabaab | Star FM
Home Wararka Kenya Dowladda oo sheegtay in 300 oo dhallinyaro ah ay ka soo baxeen...
Dowladda oo sheegtay in 300 oo dhallinyaro ah ay ka soo baxeen Al-Shabaab
Mid ka mid ah wargaysyada maalinlaha ee dalka oo soo xiganaya xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada ayaa ku warramaya in ugu yaraan 300 oo dhallinyaro Kenyaan ah ay iskaga soo tageen ururka Al-Shabaab.
Dowladda ayaa sheegtay in da’yartan ay si dhuumaaleysi ah ku galeen Soomaaliya si tababar loo siiyo balse ugu dambeyn la soo badbaadiyay.
Waxaa arrinkan ka wada shaqeeyay guddi ay xubno ka yihiin waaxyo badan iyo ururrada rayidka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dadaallada dib wadanka loogu soo celiyay dhallinyarada ay socdeen in ka badan 6 bilood .
Da’yarta dhalasho ahaan ka soo jeedo ismaamullada gobolka xeebta ee isku soo dhiibay laamaha ammaanka ee Kenya ayaa badankoodu da’a ahaan ka yar 30 sano.
Canon Harun Rashid oo ka mid ah mas’uuliyiinta xarunta (NCTC) ayaa sheegay in dowladda ay si shuruud la’aan ah ku qaabishay dhallinyarada .
Waxaa uu xusay in hadda barnaamijyo talasiin ah loo fidin doono si aynan dib ugu laaban argagixisada.
Previous articleDHAGEYSO:Puntland oo laga hirgelinayo warshad biyaha badda lagu beddelayo
Next articleWilliam Ruto oo sheegay inuusan ka bixi doonin Jubilee ka hor doorashada guud